बा'स्तविकता खु'ल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँको झा'डीभित्र कसले फा'ल्यो ब'च्चा (भिडियो) - Filmy News Portal Of Nepal
काठमाडौको कपनस्थित आकाशे धारामा झा’डीमा एउटा बा’कसभित्र ४, ५ दिनकी एक नाबालिक बच्चा फे’ला प’रेकी छिन् । के’यर बाल गृहका नानीहरु बारिमा खेल्न जाँ’दा भे’टेर केयर बाल गृहकी सन्चालिका पुष्पा अधिकारीले सं’रक्षण गरि सु’रक्षित रा’खेकी छिन् ।
टेस्टी बिस्कुटको बाकसमा कपडामा बे’रिएको अ’वस्थामा भे’टिएकी बालिकालाई अहिले आमा बनेर पुष्पा अधिकारीले हे’रचाह ग’रिरहेकी छिन् । यति सुन्दर अनि नि’र्दोष बच्चालाई यो ब’र्षाया’मको समयमा त्यसरी छा’डेर जाने आमा कति नि’र्दयी हो’लिन् ? त्यसरी फा’ल्नु नै थियो भने यी ना’बालिकालाई संसारमा जन्म नै किन दि’ईन् होला ?
कसको बच्चा हो थाहा छैन तर जो कोहि आमाले यो नवालक बच्चालाई यसरि छा’डेर ग होएको उसलाई यो पा’पले कहिले छा’ड्ने छैन । बच्चा जन्माउनु मात्र ठुलो कुरा हैन तर बच्चाको उचित हे’रचाह गर्नु पनि हरेक बाबु आमाको दायित्व हो ।
आयुषा गौतम र अमृत सापकोटाको इन्द्रेणी कार्यक्रमको ‘गेटमै दो’होरीमा ध’म्साध’म्सी च’ल्यो(भिडियो)